मुस्लिम समुदायका अलमुताइरीले देखाएको धार्मिक सहिष्णुता ! – Dainik Sangalo
मुस्लिम समुदायका अलमुताइरीले देखाएको धार्मिक सहिष्णुता !
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन २३, २०७८ समय: १९:०७:१७
राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले नेपालमा बेग्लै प्रभाव पारिरहेका छन् । फुटबल टिमलाई सफलताको भ¥याङ चढाउन होस् वा मुस्लिम समुदायबाट आए पनि हिन्दू सम्प्रदायका पर्वहरूमा खुसी मनाएर होस् उनी सबै नेपालीका प्रिय बनिसकेका छन् ।
बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नाटकीय शैली प्रस्तुत गरेर आलोचित हुने उनले फेसबुकमै प्रेम पनि छर्छन् । त्यसको उदाहरणस्वरूप बिहीबार (आज) फेसबुकमा पोस्ट भएको दसैँ शुभकामनालाई लिन सक्छौँ । यसमा चित्त नबुझाउनेहरू छन् भने जनैपूर्णिमाका दिन लगाइने डोरो हातमा लगाएको फोटोलाई लिन सक्छन् ।
हातमा डोरो बाँधेका उनले क्याप्सनमा ‘आई एम नाउ प्रोटेक्टेट । ह्याप्पी रक्षा बन्धन’ लेखेका थिए । यसको शाब्दिक अर्थ हो, ‘म अब सुरक्षित छु, रक्षाबन्धनको शुभकामना !’ यी शब्दले भने जस्तै इस्लाम धर्म मान्ने अल्मुताइरीलाई हिन्दु धर्मावलम्बीले श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन बाँध्ने रक्षाबन्धनले कति सुरक्षित गर्छ उनलै जानून् । तर यसले अल्मुताइरी धार्मिक रूपमा सहनशील छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
यस्तै, नेपाली हिन्दूहरूको महान् पर्व दसैँको सुरुआती दिन घटस्थापनामा अलमुताइरीले सन्देश दिँदै प्रायः चाडमा नेपालीले जस्तै उत्सव गर्न सक्छु भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे । अलमुताइरी कुवेती मूलका यी पूर्वखेलाडी हुन्, जो एक मुस्लिम समुदायका हुन् । तर नेपाल र नेपालप्रति उनले छर्लङ्ग प्रेम दर्साएका छन् ।
उनी हाल नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमलाई माल्दिभ्समा जारी १३औँ संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा सफलतातिर धकेलिरहेका छन् । सुरुआती खेलमा घरेलु टिम माल्दिभ्सलाई १–० गोलको र दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई ३–२ गोलले हराएर नेपाललाई लगातार दोस्रो सफलता दिलाएका अलमुताइरी अब बलियो टिम भारतसँग पनि सुखद नतिजा आत्मसात् गर्ने लक्ष्यमा छन् ।
आइतबार नेपालले भारतविरुद्ध खेल्दा उनी नेतृत्वको टिमले जित निकाल्न सक्ला वा नसक्ला, गोल गर्न सक्ला वा नसक्ला त्यो खेलले नै बताउने छ । तर उनले देखाएको उदारता र धार्मिक सहिष्णुताको आशिर्वाद उनीमाथि लागोस् । हाम्रो शुभकामना छ ।
Last Updated on: October 9th, 2021 at 7:07 pm